बाबुराम भट्टराईले त्याग देखाउनुभएको छ, हैसियत अनुसारको पद पाउनुहुन्छ- राजेन्द्र महतो, वरिष्ठ नेता, जसपा – Namaste Dainik
June 8, 2020 July 20, 2020 NamastedainikLeaveaComment on बाबुराम भट्टराईले त्याग देखाउनुभएको छ, हैसियत अनुसारको पद पाउनुहुन्छ- राजेन्द्र महतो, वरिष्ठ नेता, जसपा
काठमाडौं, २६ जेठ । जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी एकीकरण पछि निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि सबैले केही न केही त्याग गर्दा यताउता भएको बताएका छन् । उनले छिट्टै बैठक बसेर हैसियत अनुसार पदहरु दिइने बताएका छन् । यसै सेरोफेरोमा महतोसँग एनआरएन रेडियोका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
नेकपामा पनि दुई जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईंहरुको पार्टीमा पनि दुईजना अध्यक्ष भए नि ?
हामी दुईवटा पार्टी एकीकरण भएका छौं । एकीकरणका बेला दुवै पार्टीलाई समान हैसियत दिनुपर्ने थियो । त्यही भएर दुई पार्टीलाई समान हैसियत दिँदा दुईजना अध्यक्ष हुनुभएको हो । पार्टी एकता गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्यौं । अब विधान अधिवेशन गछौं । त्यो अधिवेशनपछि दुईवटा अध्यक्ष नरहनेगरी अगाडि बढ्छौं ।
एकल नेतृत्वमा जानुपर्ने दवाव थियो तपाईंहरुलाई फेरि दुईवटा अध्यक्ष राखेर जानुभयो किन ?
दुई पार्टी एकता गर्दा त्यो कुरा आवश्यक थियो त्यसलाई टेकेर गरेका अहिलेलाई गरेका हौं । विधान अधिवेशनपछि हामी एकल अध्यक्षमै जाने हो । दुई पार्टी एकता गर्नेबेलामा नै त्यो सम्झौता गरेका थियौं ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट जनताले आशा गरेका थिए, त्यहाँ पनि दुई अध्यक्ष बनाएर कम्युनिस्ट मोडेलमा जाँदा त पदीय भागबन्डामा मात्रै पार्टी एकता गरेको सन्देश गयो नि ?
दुईवटा अध्यक्ष भएपनि कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हामी गर्दैनौं । अब यो दर्ता भइसकेपछि दुई अध्यक्षले के के गर्ने भनेर जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्दछौं । छिट्टै नै अध्यक्षलगायत सबै साथीहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दछौं । कम्युनिस्ट पार्टीको जसतो कसैको अधिकार हुने, कसैको नहुने चाहीं रहँदैन । दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी बाडफाड हुन्छ ।
महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा राख्नुभएको दुवै अध्यक्षको बराबर हैसियत हो ?
बिलकुल बराबर हैसियत हो दुवै अध्यक्षको । जिम्मेवारी पनि हामी दुवै अध्यक्षलाई बराबरी दिन्छौं । कमिटिले दिएको जिम्मेवारी अनुसार दुवै अध्यक्षले बहन गर्नुपर्छ पार्टीलाई अगाडि बढाउन । दुवैको जुन कार्यकारी जिम्मेवारी छ, त्यो बाँडफाँड हुन्छ । जिम्मेवारी दिँदा यो जिम्मेवारी यहाँले बहन गर्नुपर्यो, त्यो उहाँले जिम्मेवारी यहाँले बहन गर्ने गरेका छौं । त्यसकारण हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो हुँदैन ।
पार्टी एकीकरण गरेर त राम्रो गर्नुभयो, तर पद मिलाउन त धेरै रस्साकस्सी भयो नि ?
पार्टी जोड्दा नेता, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन ठूलो चुनौति हुन्छ । त्यो चुनौतिका बाबजुद पनि हामीले पार्टी दर्ता गरायौं । यो दर्ताको प्रक्रिया टुंगिएपछि बाँकीको जति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सही ढंगले व्यवस्थापन गर्दछौं । जुन गुनासो सुनिएको छ, असन्तुष्टिहरु देखिएका छन् । त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यसको पनि काम हामी गर्दछौं ।
डा. बाबुराम भट्टराईलाई त वरिष्ठ नेता मात्रै बनाउनुभयो कुनै पनि पद दिनुभएन नि किन ?
पार्टी दर्ता गराउन जरुरी नै थियो । अझ केही छलफल गर्न बाँकी नै छ । उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे पार्टीको कुनै पद सानो कुरा हो । हिजो पार्टी दर्ता गराउने बेलामा उहाँले मलाई वरिष्ठ नेता भनेर राखौ पार्टी चाहीं दर्ता गरिहालौ भनेर उहाँले नै उदारता देखाउनुभएको हो । पार्टी दर्ता गराउन उहाँले ठूलो योगदान दिनुभएको छ । त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । अब विधान समिति आइसकेपछि सबैले जिम्मेवारी पनि पाउनुपर्छ । हैसियत अनुसारको पद पनि पाउनुपर्छ त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो ।
वरिष्ठ नेतामा पनि अशोक राईपछि डा. बाबुराम भट्टराईलाई राख्नुभयो नि के कारणले ?
आदिवासी जनजातिलाई सम्मान गरेर त्यसो गरेका हौं । यो मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति बनाउने हाम्रो सुरुदेखिकै मिसन हो । यो देशको शोषण र पीडामा परेको समुदायलाई हामीले सम्मान दिनुपर्छ । त्यसअनुसार आदिवासी जनजातिलाई उच्च सम्मान गर्ने प्रयास गरेका हौं । हाम्रो पार्टी कांग्रेस, कम्युनिस्ट जस्तो जातलाई प्रतिशतको आधारमा समान बनाउने होइन । हाम्रो त बाहुन, क्षेत्री, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, उत्पीडित, मधेसी, थारु सबैको पार्टी बनाउने हो । अहिले जनताले एउटा लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति खोजेको छ । त्यो पुरा गर्न हामीले दुईवटा पार्टी एक बनाएका हौं । अरु पार्टीहरुसँग पनि हाम्रो सम्पर्क भइरहेको छ । उहाँहरुलाई पनि समाहित गरेर त्यसमा बुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, न्यायप्रेमी सबैलाई समेटेर एउटा सशक्त वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्दछौं । जसको बलले देशका लोकतान्त्रिक समाज स्थापना गर्ने हो । अहिले जसरी अल्पमले बहुमतमाथि शासन गरिरहेको छ । त्यसको अन्त्य गर्न सकोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई वरियता क्रममा पनि वरिष्ठको दोस्रो स्थानमा राख्दा जनतामा नराम्रो सन्देश जाँदैन ?
त्यस्तो केही हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । त्यस्तै कांग्रेस र कम्युनिस्टको वैकल्पिक शक्ति बनाउँदा हाम्रो पार्टीमा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री । मर्यादा क्रममा उच्च तहमा हुनुहुन्छ । त्यो त हामीले गने नै हो । उहाँ तेत्रो ठूलो पार्टी छोडेर हामीसँग एउटा मिसनको लागि आउनुभएको छ । त्यसैले मिसनको लागि यस्तो भएको हो । उहाँको मानसम्मान त छँदैछ नि । मानसम्मान पदले मात्रै पाउने होइन । जनताले भोट दिएर देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । त्यसैले उहाँलाई जनताले नै प्रधानमन्त्री पद दिएर मानसम्मान दिइसकेका छन् ।
अब संयुक्त दलको अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई बनाउने हो ?
बिलकुल, बिलकुल बनाउने हो । उहाँलाई संयुक्त दलको अध्यक्ष बनाउनेमा त हाम्रो सहमति छँदैछ नि । हिजो हतारहतारमा अलि व्यवस्थित गर्न नसकिएर त्यो भएको हो ।
संसदीय दलको नेता तपाईं हो ?
त्यो संसदीय दलले नै निर्णय गर्ने हो ।
होइन डा. बाबुराम भट्टराईलाई संयुक्त दलको अध्यक्ष बनाउने र राजेन्द्रलाई संसदीय दलको नेता बनाउने भनेर आएको छ नि ?
त्यो आएको हो भने पनि ठिकै छ नि । अब समझदारीहरु भइरहेको हुन्छ । यो सबको त सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिकता दिने हो । यसलाई समदारीबाटै पुरा गर्दछौं ।
अन्य नेताहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? हिजो पार्टी दर्ता गर्नेबेलामा पनि आउनुभएन नि ?
उच्चस्तरीय समितिमा उहाँहरुलाई राखिएको छ । हिजो किन आउनुभएन हामी बसेर कुरा गर्दछौं ।
तपाईंंहरुले जुन किसिमको उच्चस्तरीय कार्य समिति बनाउनुभएको त्यसको महत्व के ?
यो ५३ जनाको उच्चस्तरीय केन्द्रीय कार्यकारी समिति छ । अहिलेको अवस्थामा यो सबैभन्दा अधिकार सम्पन्न समिति हो । योभन्दा ठूलो महाधिवेशन हुन्छ । त्यसपछि विधान अधिवेशन हुन्छ । तर, आज कुनै समिति पार्टी नभएकाले सबैभन्दा ठूलो र अधिकार सम्मपन्न समिति भनेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नै हो । यो ५३ जना छौं । त्यसमा दुवै पाटीबाट ५१ जनाको नाम हामीले पठाएका छौं । त्यसमा २६ जना राजपा र २५ जना समाजवादी पार्टीबाट पठाएका थियौं ।
क–कसको नाम पठाउनुभयो ?
पदाधिकारीमा ५ जनाको नाम छ । जस्तो अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ । वरिष्ठ नेता, अशोक राई, डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महत्व रहेका छौं । त्यसपछि वरिष्ठताको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन बाँकी रहेका साथीहरुको पनि नाम पठाएका छौं । उहाँहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड भइसकेपछि व्यवस्थापन हुने छ ।
समाजवादी पार्टीबाट को को हुनुहुन्छ ?
माननीय राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, माननीय नवराज सुवेदी, परशुराम खापुङ, युवराज कार्की, रकम चुम्जोङ, रेणुकुमारी यादव, लालबाबु राउत, सुशिला यमी, खेमराज राई, गंगानारायण श्रेष्ठ, दानबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाश अधिकारी, दुर्गा श्रेष्ठ, भक्तबहादुर शाह, सुशीला श्रेष्ठलगायत गरी उहाँहरुबाट २५ जनाको नाम आएको छ । अझ दुईवटा सिट खाली नै छ । हिजोसम्म यति भएको छ । अब पछि दुई पदपूर्ति गर्दछौं ।
अहिले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएएको छ, त्यो विधेयक पारित गराउन तपाईंको पार्टी एक भएर मतदान गर्छ ?
दुवै पार्टी एक भइसकेपछि एउटै निर्णय गरेर एकै ठाउँमा हामी मतदान गर्दछौं । जे गर्नुपरेपनि अब जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्छौं । संसद् गतिविधिमा पनि हामी त्यसरी नै अगाडि जान्छौं ।
अब जनता समाजवादी पार्टीले संविधानको संशोधनको पक्षमा कि विपक्षमा मतदान गर्छ ?
पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यो कुरा भनौला । त्यो मतदान गर्नेभन्दा पहिला पार्टीको बैठक बस्छ । त्यसपछि के गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय गर्छ अनि भनौला । हाम्रो बैठकै बसेको छैन । बैठक बसेपछि एउटा समझदारी बनाउँछौं ।
त्यसोभए संविधान संशोधनको पक्षमा जान सक्छ जनता समाजवादी पार्टी ?
पार्टीको जे निर्णय हुन्छ त्यही अनुसार जाने हो नि । कुनै पार्टी, पार्टीको निर्णय अनुसार काम गरेर चल्ने हो । हाम्रो पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो अनुसार हामीले काम गर्ने हो । एउटा कुरा जुन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर सरकारले नक्सा बनाएको छ । त्यसमा हामी सबैको सहयोग र समर्थन छ । त्यो नक्सामा हामी मिलेका दुवै पार्टी र जनताको त समर्थन नै छ नि । अब हामीले सरकारले नक्सा कोरेर मात्र हुँदैन । वार्ता गरेर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याऊँ भनेका छौं । बाँकी संसदीय गतिविधि त संसदले निर्णय गरेर नै हुने हो ।
यी खानेकुरा जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ
प्रहरी र व्यवसायी सेटिङ : चर्को भाडामा बिना पास रातिराति काठमाडौँबाट यात्रु ओसार्दै ?
उदयपुरमा फेरि ३ जनामा संक्रमण:एउटेै घरका नातिनी र हजुरआमा नै संक्रमित।
‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’लाई सर्प पालन उत्पादन गर्न ७२ करोड अनुदान